ရန်ကုန်တွင် ယောဂသင်ကြားရန် အကောင်းဆုံးနေရာများ – Shwehealth.com
28. ဇူလိုငျ 2016 29. ဇူလိုငျ 2016
ယောဂဆိုသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်သော အိန္ဒိယ အသိပညာခန္ဓာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်တို့၏ ပြည့်စုံသော ညီညွှတ်မျှတခြင်းဖြစ်ပြီး အသက်ရှူ ခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ယောဂပုံစံများနှင့် တရားထိုင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ရိုးရှင်းပြီး အကျိုးရှိသော ယောဂ ပုံစံများနှင့် အသက်ရှူနည်းစနစ်များနှင့်အတူ တရားထိုင်ခြင်း၏ နက်ရှိုင်းသော အတွေ့အကြုံ၊ စိတ်၏ ပြည့်စုံကြည်လင်မှုနှင့် လူသားဖြစ်တည်မှု၏ အခြားသော မမြင်နိုင်သည့်အရာများကို လေးနက်ထင်ရှား စွာ မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ယောဂ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးများစွာရှိသည်။ ယောဂ၏ ဖြေလျှော့မှု နည်းစနစ်များသည် နာတာရှည်နာကျင်မှုများဖြစ်ကြသည့် ခါးအောက်ပိုင်းနာခြင်း၊ လေးဖက်နာနှင့် ခေငါးကိုက်ခြင်း စသည်တို့ကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးများအနက်အချို့မှာ –
သွေးဖိအားနှင့် အိပ်မပျော်မှုကို လျော့နည်းစေခြင်း
ပျော့ပျောင်းမှု၊ ကြွက်သားစွမ်းအားနှင့် ကျစ်လစ်မှုကို မြင့်စေခြင်း
အသက်ရှူခြင်း၊ စွမ်းအားနှင့် ရှင်သန်မှုကို တိုးတက်စေခြင်း
မျှတသော ဇ၀ကကမ္မဖြစ်စဉ်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းစေနိုင်ခြင်း
အားကစားသမားများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနှင့် သွေးလည်ပတ် မှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို မြင့်စေခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။
ယောဂ၏ အကောင်းဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးမှာ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းစေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ –
သတိရှိမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို မြင့်တက်စေခြင်း
စိတ်ကြည်လင်မှုနှင့် ဖြေလျှော့မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း
အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကို မြင့်စေနိုင်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုးများစွာပါ ရရှိခြင်းကြောင့် ယောဂသည် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းတွင် နာမည်ကျော်ကြားလာသည်။ နိုင်ငံတိုင်းတွင် ယောဂကို စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့် လေ့ ကျင့်နေသူများ ရှိနေကြသည်။ မြန်မာပြည်သူများသည်လည်း အသက်ရှူနည်းစနစ်များနှင့် တရားထိုင် ခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့် မစိမ်းသူများဖြစ်ရာ ယောဂနှင့်လည်း အလှမ်းမဝေးကြပေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ယောဂစတူဒီယိုများနှင့် ယောဂသင်တန်းများ များစွာရှိသည်။ ဤဆောင်း ပါးတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ယောဂသင်ယူရန် အကောင်းဆုံးနေရာအချို့ကို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁) Jenny Yoga Yangon
ယင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အကောင်းဆုံးယောဂသင်တန်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း စတူဒီယိုသည် ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများကို ပို၍ပြည့်စုံစွာနှင့်ကောင်းမွန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ရန် နှစ်သက်ဖွယ် ကောင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးထားသည်။ အဆိုပါသင်တန်း ရှိ နည်းပြဆရာအားလုံးမှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပြီး သင်တန်းတည်ထောင်သူ နည်းပြဆရာမ Jenny လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလအားဖြင့် ကာလတိုနှင့် ကာလရှည် နှစ်မျိုးစလုံးရှိသည်။ ဈေးနှုန်းမှာ စုံစမ်းရန်ဖြစ်သည်။ သီးသန့်သင်ကြားမှုကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်စာရင်းပေး သွင်းမှုကို အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီကြို၍ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းမှ စာရင်းပေးခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာ နံနက် ၇ နာရီမှ ည ၇ နာရီအထိဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းပိတ်မည် ဖြစ်သည်။ တည်နေရာမှာ အမှတ် ၂၃၇၊ ၃-က၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ဖြစ်သည်။
(၂) Yangon Yoga House
ယင်းသည်လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ နောက်ထပ်အကောင်းဆုံး ယောဂသင်တန်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းသင်တန်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံးသော အင်္ဂလိပ်စကားပြော ယောဂစတူဒီယိုအဖြစ် သိထားကြသည်။ ရေပူရေချိုးခန်း၊ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနှင့် အခမဲ့အခင်းတို့ကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နည်းပြဆရာ ၇ဦးရှိပြီး တည်ထောင်သူမှာ Jojo Yang ဖြစ် သည်။ ရွေးချယ်စရာသင်တန်းများစွာလည်းရှိသည်။ အကြွေးဝယ်ကတ်သို့မဟုတ် PayPal ကို အသုံး ပြု၍ အွန်လိုင်းမှစာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်တန်းတစ်ခုထဲအတွက် ဈေးနှုန်းမှာ ၁၂ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ သင်တန်းငါးခုဝင်ခွင့်ကို ၅၅ ဒေါ်လာဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး သင်တန်း ၁၀ခုအတွက် ၀င် ကြေးမှာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ အခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် လစဉ်၊ စတင်သုံးစွဲသူ၊ မိတ်ဆက် ခြင်းစသည့် အစီအစဉ်များလည်း ရှိသေးသည်။ သီးသန့်သင်တန်းအတွက် တစ်နာရီလျှင် ဒေါ်လာ ၆၀ နှုန်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသင်တန်းတွင် အများဆုံး သုံးဦးအထိ ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ တည် နေရာမှာ အခန်း ၄၊ ရန်ကင်းလမ်းသွယ် (၁)၊ ရန်ကင်းလမ်းနှင့်ရန်ရှင်းလမ်းထောင့်အနီး၊ ရန်ကင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်ဖြစ်သည်။
(၃) Balance Fitness
Balance Fitness သည်လည်း ယောဂသင်ယူနိုင်သော အကောင်းဆုံးစတူဒီယိုများထဲမှ တစ် ခုဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ယောဂသင်တန်းများ၊ ရေချိုးကန်၊ ချွေးထုတ်ခန်း၊ ရေနွေးငွေ့ခန်းများ၊ အစား အသောက်ဘား၊ သီးသန့် စတူဒီယိုများနှင့် အနားယူမှုဇုန်တို့ပါဝင်သည့် ပြည့်စုံသော အားကစားခန်းမ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းစတူဒီယိုမှ ယောဂနည်းပြများမှာ မစ္စမီးမီးနှင့် မစ္စတာ ဂျက်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ရန် ကုန်တွင် Balance Fitness သင်တန်းနှစ်နေရာရှိသည်။ Balance Fitness 1 မှာ အမှတ် ၆၄ (ဆ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တွင် တည်ရှိပြီး Balance Fitness2မှာ အမှတ် ၁၀၃၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနှင့် သံလွင်လမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တွင် တည်ရှိသည်။ ဖွင့် လှစ်ချိန်မှာ နံနက် ၆ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအထိဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းမှာ စုံစမ်းရန်ဖြစ်သည်။